Khaladaadka of Crypto Investors. Error 2 - Blockchain News
Cryptotrader Peter McCormack falanqeeyay xaalada suuqa crypto iyo garawsannay in dunida ka badan crypto cusub ay suuqa soo galaan la hubaal ah in ay awoodaan in ay si deg deg ah u hesho taajir noqon doonaa yimid. Sida laga soo xigtay McCormack, waxay keenaysaa ma aha oo kaliya in ay niyad jab, laakiin sidoo kale in ay khasaare deg deg ah ee lacagaha.
Dabcan, marka suuqa la kulma muddo qaadataan-off ah, maal badan oo cusub yimaadaan in ay, rajeynaya in ay helaan faa'iido fudud. Waxaa intaa dheer, waxay qori ku saabsan in warka oo dhan, iyo kuwa maareeyo si aad u hesho mushahar fiican, u sheeg oo ku saabsan sheekooyinka guusha ay. Laakiin goobooyin ku dhashay: waxaa ku dhacay xumbo dhibic-com a, oo la mid ah la ahaa 2008 xumbo guryaha.
Si kastaba ha ahaatee, suuqa crypto uusan qorshaha dakhliga dagdag ah uma shaqeeyo. Tani waa suuq kuteen, taas oo ciyaartoyda qaar ka mid ah ay awoodaan in ay si deg deg ah u hesho taajir. Dad badan oo si deg deg ah looga badiyay maalgelinta oo dhan. suuqa Crypto, sida suuqa kasta oo kale oo, waa meerto, taas oo macnaheedu yahay in ka dib markii in muddo ah koritaanka, xilliga dayrta daruuri iman doonaa. Sida ka dhacay 2013: jadwalka guud ee cryptology, mudadaas u eg daqiiqad koritaanka yar, ka dib markii taas waxaa jiray dhibic ah aan qiimo lahayn.
Si kastaba ha ahaatee, dhab ahaan, ee November 2013 xaraf ee suuqa crypto si degdeg ah u koray la tixraacayo ee imaanshiyaha ciyaaryahano cusub kuwaas oo maalgashaday Seeraar – lacagta kacaan cusub ee mustaqbalka. Sidaas, by December 4, 2013 tiradaasi gaadhay ugu badnaan ugu horeysay ee $ 15.7 billion. Oo by December 19, xaraf dhacay maratay ku dhowaad laba kol in – si ay u $ 6.9 billion. suuqa Crypto qaatay in ka badan laba sano inuu ka soo kabsado iyo gaari marna la soo dhaafay.
Xaaladdan soo celin karaa, inkastoo maanta suuqa ugu lacagta crypto waa mid aad uga duwan waxa aan arkay in 2013: ciyaaryahan ayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan, iyo hannaanka deegaameed si degdeg ah horumarinta iyo helidda isticmaalka cusub. Si kastaba ha ahaatee, tani waa suuq kuteen in dumi karaa waqti kasta. Dabcan, waxaa jira tusaalayaal ku saabsan sida aad ku heli karto hodan dhakhso ah waxa on, si kastaba ha ahaatee, fursadaha badiyay maalgelinta oo dhan ay sabab u tahay xeeladaha maalgashiga qorsheysan liidata jira waqtiyo badan oo sare.
Khaladaadka of Crypto Investors. Error 1 Khaladaadka of Crypto Investors. Error 3
Sidee Cryptocurrency M ...
maxkamadda Greek in dheeraad ah ...
Post Previous:Khaladaadka of Сrypto Investors. Error 1
Post Next:Khaladaadka of Crypto Investors. Error 3